देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको गोप्य पत्र सार्वजनिक गरः डा. भीम रावल « रिपोर्टर्स नेपाल
देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको गोप्य पत्र सार्वजनिक गरः डा. भीम रावल
काठमाडौं, कात्तिक १९ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई पठाएको गोप्य पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक दल विभाजन र अदालतमा कचिंगल बढाउने धन्दा चलाउनु व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको प्रमाणित भएको उनको आरोप छ । उनले भने, “राष्ट्रघाती नेताहरुका कारण गण्डकी गयो, कोसी गयो, महाकाली गयो, माथिल्लो कर्णाली गयो । अब नेपाल उपनिवेशीकरणको बाटोमा छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको रणमैदान बनाउने षड्यन्त्रको हतियार एमसीसी पारित गर्छु भन्नु कानुनको ‘क’ र राजनीतिको ‘र’ नजान्ने मानिसले भन्ने कुरा हो ।”
अर्को प्रसंगमा नेता डा. रावलले एमालेको दसौं महाधिवेशनका क्रममा सदस्यता र प्रतिनिधिमा धाँधलीको संकेत मिलेको बताए । उनले थपे, “कैलालीमा संगठन विभागले दिएको तथ्यांकभन्दा फरक सदस्यता देखियो । यसो गर्दा तत्कालका लागि कसैलाई आनन्द आउला । पदमा जानका लागि जे पनि गर्न खोज्नु पार्टीमार्फत मुलुकलाई नै खाल्डोमा हाल्नु हो ।”
महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने समय आएपछि तय हुने उनले बताए । उनले भने, “महाधिवेशन भनेको नेतृत्व चयनका लागि नै हो । कुन पदमा उम्मेदवारी दिने र कसरी दिने भन्नेबारेमा कसैसँग छलफल भएको छैन । समय आएपछि जानकारी दिनेछु ।”